Baadhitaanka indhaha - Delta Engineering Belgium
Kagaji qeybta "Baadhitaanka indhaha"
Isniintii, 13 Oktoobar 2014 by Injineer Delta
Nidaamka aragtida dhaqaale ee isafgaradka
Waa nidaam aragti dhaqaale oo isku jira, oo loogu talagalay in lagu meeleeyo gudbiyaha hore u jiray. Waxay kuu oggolaaneysaa inaad eegto cabbirka dhalada, dhibco madow, ukun, ugxan, xoqid dhalo, midabbo, iwm.
Ugu badnaan ilaa 4 kamarado oo ka imanaya qaraarada kala duwan, ilaa 12MB, ayaa la heli karaa.
Published in Baadhitaanka indhaha
Nidaamka aragga oo horumarsan
Waa nidaam aragti fog, oo loogu talagalay in lagu dhex daro khadadka wax soo saarka. Waxay kuu oggolaaneysaa inaad eegto cabbirka dhalada, dhibco madow, ugxan, xoq, dhalo-gooyo, midabbo, iwm.
Ugu badnaan ilaa 8 kamarado oo ka imanaya qaraarada kala duwan, ilaa 12MB, ayaa la heli karaa.
Nidaamka aragtida xawaaraha sare
Waa nidaam aragti xawaare sare leh, oo loogu talagalay in lagu dhex daro khadadka wax soo saarka. Waxay kuu oggolaaneysaa inaad eegto cabbirka dhalada, dhibco madow, ugxan, xoq, dhalo-gooyo, iwm
Habka aragtida horumarsan ee weelasha
Waa nidaam aragti fog, oo loogu talagalay in lagu dhex daro khadadka wax soo saarka. Naqshad gaar ah oo loogu talagalay baaritaanka jerrycans oo leh mugga ilaa 10L.
Isniin, 26 Abriil 2021 by Sara
Qaybta kormeerka kamaradda, oo lagu dhejin karo tijaabiyaha
Qaybta kormeerka kamaradda ee INTRAVIS ee kormeerka hoose, kormeerka dusha sare, baaritaanka qoorta… dhalooyinka caagga ah. Ku dheji furaha tijaabiyaha daadinta!